जीएसजीमा विभागको छापा Yes Khabar | Nepali News from Nepal | Recent News
जीएसजीमा विभागको छापा
काठमाडौँ - वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक सुरक्षा जाँच गर्ने जीएसजी सर्भिस प्रालिको कार्यालयमा मंगलबार छापा मारेको छ । जीएसजीले सरकारको स्वीकृतिबिना मलेसिया जाने नयाँ कामदारको बायोमेट्रिक सुरक्षा जाँच गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा विभागले छापा मारेको हो । कामदारको सुरक्षा जाँच गरेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सरकारले मलेसियातर्फ नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रोकेको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जनवरी १ देखि अहिलेसम्मको सबै रेकर्डहरू माग गरेको बताए । जीएसजीले काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासको अनुमति लिएर मात्रै रेकर्डहरू हेर्न दिने भन्दै एक दिनको समय मागेको छ । प्रहरीका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द थपोलिया फरार सूचीमा छन् । शक्ति केन्द्रको आडमा उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै यो कम्पनीले वैधानिकता पाएको थियो । सेवा दिएबापत कम्पनीले कामदारसँग ३२ सय शुल्क लिने गरेको थियो ।
सखबर संचार मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल एक नेपाली डिजिटल पत्रिका हो । जसमा विषेश गरी नेपाली राजनीति, सामाजिक, व्यवसायिक तथा विश्व परिबेश संग सम्विन्धत ताजा समाचारहरु हेर्न सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।
सार्वजनिक बसमा हुने महिला हिंसा रोक्न विशेष प्रहरी टोली परिचालन
काठमाडौं - सार्वजानिक यातायातमा महिलामाथि हिंसा हुन नदिन प्रहरीले आगामी दिन थप विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ । गत वर्ष उपत्यकाभित्रका बढी चाप हुने मार्गका सार्वजानिक बस तथा माइक्रोबसमा विशेष प्रहरी परिचालन गरिएकामा सार्वजनिक बसमा यात्रा गरेका महिलामाथि हिंसा गर्ने २४३ लाई विशेष टोलीले पक्राउ गरेको थियो । काव्य विद्यालय–प्रहरी समन्वय समिति, महानगरीय प्रहरीवृत्त नयाँ बानेश्वर तथा बानेश्वर सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा रानीपोखरी महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले सो स्थानमा अगामी दिन थप प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण उत्पन्न साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा ‘साइबर ब्युरो’ स्थापना भएको जानकारी दिँदै सो ब्युरोले अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी कामसमेत गरेको जिकिर गरे ।
पछिल्लो समयमा साइबर अपराधमा किशोरकिशोरी र युवायुवतीको बढी संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले कम उमेरका आफ्ना छोराछोरीलाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न अभिभावकलाई सुझाव दिए । प्रहरी नायब महानिरीक्षक थापाले काव्य विद्यालयका प्राचार्य नवराज बास्कोटालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए । नयाँ बानेश्वर प्रहरीवृत्तका प्रमुख प्रहरीनायब उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेले साइबर अपराध, लागुपदार्थ दुव्र्यसन अन्त्य, सडक सुरक्षाका लागि समुदाय सचेत भई अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय शान्तिसुरक्षा, बालबालिकाको आधारभूत सुरक्षा तथा जानकारीका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम तीव्ररुपमा सञ्चालन भइराखेको छ ।
दुई विद्येयक सदनमा पेश
काठमाडौं– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरे । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी आर्कर्षित गर्नका लागि उक्त विधेयक आवश्यक रहेकाले सदनमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले सदनमा पेश गर्नुभएको विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश हुँदा बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘प्रहरी समायोजना विधेयक,२०७५’ सदन समक्ष पेश गरे । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा दुई अनुसार सदन समक्ष उनले सो विधेयक पेश गरे ।
विधेयकका सन्र्दभमा सदनलाई जवाफ दिदैं मन्त्री थापाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रहरी समायोजना गर्नुपर्ने भएकाले सो विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी गराए । रासस
कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग अब नेपालगञ्ज
बाँके– कैलाश मानसरोवर पुग्न चाहने तीर्थालुहरुका लागि हिजोआज नेपालगञ्ज केन्द्र बन्न थालेको छ । नेपालगञ्जमा पर्यटकको ओइरो लाग्न थालेपछि यहाँ एक पछि अर्को नयाँ होटलहरु बनिरहेका छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित अनेक व्यवसाय चम्किएका छन् । लाग्छ, नेपालगञ्जमाथि कैलाशपति महादेवको बरदान वर्षिएको छ । नेपालगञ्जको भाग्य चम्किनुको अर्को कारण हो, मुगुको राराताल । यो ताल हेर्न जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको प्रवेशद्वार पनि नेपालगञ्ज नै हो । मानसरोवर चीनमा पर्छ, त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले नेपालको बाटो प्रयोग गर्छन् । मानसरोवर चीनमा परेपछि पर्यटकले त्यहाँ नपुगुञ्जेलसम्म नेपालमा खर्च गर्छन् । अधिकाँश पर्यटक नेपाल भएर मानसरोवर जाने हुँदा उनीहरुले नेपालमै ९० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गर्छन् । अहिले पर्यटनका लागि उपयुक्त मौमस होइन तर, यही बेमौसमी ‘टेको’ भारतीय पर्यटकले धानेका छन् ।
मानसरोवर जाने उपयुक्त समय हरेक वर्षको वैशाख महीनाको मध्यदेखि भदौ महिनासम्म (मे महिनादेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म) भए पनि बेमौसममा पर्यटकको रौनक नेपालगञ्जमा देखिँदै छ । ‘मानसरोवर–कैलाश पर्वत भ्रमणको रुचि औधी रहेकाले यही बेमौसमको ‘टेको’ भारतीयले धानेका छन्,’ होटल व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले भने । नेपाल–भारत व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने याम शुरु भइसकेको छ । होटल व्यवसायीहरुले कमाउने खास समय पनि यही हो । हिन्दू धर्मावलम्बीहरु जीवनमा एकपटक पवित्र धार्मिकस्थल तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्ने आकाँक्षा राख्छन् । याम सुरु भएसँगै नेपालगञ्ज हुँदै मानसरोवरतर्फ प्रस्थान गर्ने गर्छन् । मे महीनाबाट याम शुरु भएको छ । ठूलोे सङ्ख्यामा मानसरोवर जाने पर्यटकहरु नेपालगञ्ज भित्रिन थालेका छन् ।
मानसरोवर तीर्थाटनका लागि जानेमा अधिकाँश यात्रु भारतीय हुन्छन् । यो ठाउँ समुद्री सतहबाट करीब ६ हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको छ । मानसरोवर ताल कैलाश पर्वतको फेदी हो । कैलाश पर्वत फेरो लगाउन साढे दुई दिन लाग्छ । साधारणतया ४० देखि ७० वर्ष उमेरका भारतीय पर्यटक कैलाश पर्वत जाने गर्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालीहरु पनि मानसरोवर यात्रामा जाने गरेका छन् ।
यसरी फेरियो भाग्य
नेपालगञ्ज अतितदेखि नै पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो शहर, वाणिज्य तथा प्रशासनिक केन्द्र रहँदै आएको छ । द्वन्द्वकालमा पश्चिम पहाडी क्षेत्र अशान्त बनेपछि नेपालगञ्ज तथा आसपासमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस ओइरिए । पश्चिम नेपालमा शान्तिको प्रयास गर्ने अनेक सङ्घसंस्थाले नेपालगञ्जलाई मुकाम बनाए । द्वन्द्वकालपछि नेपालगञ्जको भाग्य अलि सुस्त भएको थियो तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अवस्था फेरिनाको मुख्य कारण हो कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुहरुको मार्ग नेपालगञ्ज बन्न थाल्नु । यहाँ भारतीय पर्यटकहरुको ओइरो लाग्न थालेको छ । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थालुहरुको मुख्य मार्गका रुपमा नेपालगञ्जको भाग्य चम्कन थालेको हो । भारतीय तीर्थालुहरु विमानबाट काठमाडौं हुँदै नेपालगञ्ज आइपुग्छन् । स्थलमार्गबाट आउनेहरु रुपैडिहा नाका हुँदै नेपालगञ्ज छिर्छन् । नेपालगञ्ज आइपुग्ने तीर्थयात्रीहरु हुम्ला हुँदै मानसरोवर पुग्छन् ।
कैलाश मानसरोवर हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बीका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो । चीनमा पर्ने मानसरोवर पुग्न भारतबाटै पनि मार्ग नभएको होइन तर नेपालबाट जति सुरक्षित छैन । बेलाबखत हुने भारत र चीनको द्वन्द्वका कारण मानसरोवर जाने यात्री समस्यामा पर्छन् । त्यसैले पनि भारतीय तीर्थालुहरुको मार्ग नेपाल हो र नेपालको पनि नेपालगञ्ज हो । नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमीकोट हुँदै मानसरोवर जान सकिन्छ । पछिल्लो समया नेपालमा छाएको शान्तिले पनि भारतीय तीर्थालुहरुको मानसरोवर जाने मार्ग नेपालगञ्ज बनेको हो । शान्तिले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने उक्ति यथार्थमा परिणत भएको महशुस नेपालगञ्जवासीले गर्न थालेका छन् । नेपालगञ्जलाई भारतीय तीर्थालुहरुले चुन्नाका अर्को कारण हो भारतको दिल्ली र लखनऊ हुँदै नेपालगञ्ज पुग्ने ६ लेनको सडक । भव्य सडक बनेपछि नेपालगञ्जमा पर्यटकको आगमनसँगै आर्थिक गतिविधिले पनि तीव्रता पाउन थालेको छ ।
ओइरिँदै पर्यटक, थपिँदै होटल नेपालगञ्ज नाकाबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न जान अहिले दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटकहरु नेपालगञ्ज पुग्न थालेका छन् । भारतीय पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि नेपालगञ्जका प्रायः सबै ठूला र मध्यम होटलहरु भरिभराउ हुँदै गएका छन् । भारतका चेन्नई, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक र तामिलनाडुका यात्रीहरु नेपालगञ्ज भएर मानसरोवर पुग्ने गरेका छन् ।
गत वर्षमात्रै करीब १० हजार भारतीय पर्यटक नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमीकोट हुँदै कैलाश मानसरोवर गएका थिए । गतवर्ष करीब १५ हजार पर्यटकले कैलाश मानसरोवरको दर्शन गरेका थिए । यीमध्ये करिब पाँच हजार पर्यटक काठमाडौंबाट हवाईमार्ग हुँदै नेपालगञ्ज आएका थिए भने बाँकी यात्रु लखनऊ रुपैडिया हुँदै आएका थिए । यसवर्ष यो सङ्ख्या बढेर करीब २५ हजार पुग्ने अनुमान छ । तिब्बती मार्ग नखुल्दा हजारौं भारतीय तीर्थालु नेपालगञ्ज–सिमकोट–हिल्सा हुँदै कैलाश परिक्रमामा गइरहेकाले सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ । मानसरोवर जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ होटलसहित अन्य पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको बताउँछन्, उपाध्यक्ष काफ्ले ।
बैशाखदेखि असोजसम्म काठमाडौं–नेपालगञ्ज हवाई उडानको सङ्ख्या दोब्बर हुने गरेको छ । नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमीकोटका लागि दैनिक १६ वटासम्म उडान हुने गरेका छन् । मानसरोवरलाई गन्तव्य बनाएर नेपालगञ्ज आइपुग्ने भारतीय पर्यटक निकै स्तरीय (खर्च गर्ने क्षमता भएका) छन् । यस्ता पर्यटकले तारे होटल खोज्ने गरेपछि नेपालगञ्जमा धमाधम तारे होटलहरु थपिँदै छन् ।
नेपालगञ्जसँगै जोडिएको शहर कोहलपुरमा सेन्टर प्लाजा होटलले आफ्नो सेवालाई बढाउँदै लगेको छ । नेपालगञ्जमा सोल्टी, सिद्धार्थ भ्यूू, किचन हट, बाटिका, स्नेहा, सिटी प्यालेस, सिग्नेट कृष्णा, कलपत्रु जस्ता ठूला र सुविधा सम्पन्न होटलसहित करिब दुई दर्जन साना होटल थपिएका छन् । पर्यटक बढेपछि होटल व्यवसायीहरु पनि उत्साहित भएको होटल सिद्धार्थका प्रबन्ध निर्देशक मुक्तिराम भण्डारी बताउँछन् ।
उनीहरुले क्षमता सँगसँगै सेवाको गुणस्तर पनि बढाएका छन् । नेपालगञ्जका होटलहरुले दैनिक एक हजार पर्यटकहरुलाई स्तरीय आतिथ्यता दिन सक्छन् । नेपालगञ्जका पर्यटन व्यवसायी प्रशान्त शाह भन्छन् – ‘नेपालगञ्जको भविष्य अझ सुनौलो छ । मानसरोवरको प्रमुख नाका यही हो । भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज छ । सडक सञ्जालका कारण पनि भारतीयको सङ्ख्या बढिरहेको छ । फलतः नेपालगञ्जको पर्यटन उद्योग मौलाएको छ ।’रासस
जुका–चुर्नाले सतायो ? खानोस् यी ६ खानकुराहरु
एजेन्सी - हाम्रा शरीरभित्र विभिन्न परजीविहरु हुन्छन् । ती परजीविहरुले हाम्रो शरीरको पोषणहरु सोसेर खाइदिइरहेको हुन्छ । मानव शरीरका लागि हानिकारक तर हाम्रो शरीरभित्रै डेरा जमाएर बसेका त्यस्ता परजीविहरुलाई मार्नका लागि प्राकृतिक रुपमा नै केही खानेकुराहरु पनि पाइन्छन् । आउनोस्, त्यस्ता स्वस्थकर, मानावोपयोगी खानेकुराहरुबारे जानीराखौं ।
बेसारलाई चमत्कारी खानकुरा मानिन्छ । बेसारले शरीरभित्र रहेका जुकाहरु लगायत अन्य विभिन्न परजीविहरुलाई मारेर शरीरबाट बाहिर निस्कासन गर्न मद्दत गर्छ ।
ल्वाङमा कार्योफिलिन (Caryophyllene) पाइन्छ । रगतमा ल्वाङमा पाइने त्यो तत्व मिसिएपछि शरीरभित्र रहेका परजीविहरु, तिनका अण्डा र लार्भालाई मारिदिन्छ ।
ताजा लसुनमा एलिसिन (Allicin) पाइन्छ । यो एलिसिन प्राकृतिक रुपमै पाइने त्यस्तो प्रभावशाली एन्टिबायोटिक्स हो, जसले २० किसिमका व्याक्टेरियाहरु, ६० किसिमका ढुसी (फङ्गस) र केही खतरनाक भाइरसहरुलाई समेत मारिदिन्छ ।
फर्सीको बियामा क्युकुरविटासिन (Cucurbitacin) पाइन्छ । यसमा पनि प्रतिजैविक तत्त्वहरु पाइन्छ । त्यसले शरीरमा भएरका परजीविहरु र तथा तिनका लार्भाहरुलाई पक्षघात गराएर निष्क्रिय बनाइदिन्छ ।
मेवाका दानाले शरीरभित्र टेपवर्म र अन्य विभिन्न किसिमका परजीवि एवं जुकाहरुलाई मारिदिन्छ ।
शरीरभित्र रहेका जुकालगायतका परजीविहरुलाई मार्नको लागि अदुवा पनि एउटा प्रभावकारी खानेकुा हो । यसले आन्द्राको संक्रमणबाट हामीलाई बचाउँछ र आमाशयमा एसिडको नियमित उत्पादनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ ।
आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने भागवत गीतामा भनेका मुख्य सार बारे जानकारी लिनुहोस
बाइबल क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ, कोरान मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ हो । त्यसैगरी, हिन्दु धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ वेद हो। वेद चार वटा छन् ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थर्ववेद । यी चार वेदको निष्कर्ष उपनिषद् ग्रन्थ हो।उपनिषद्बाटै १८ पुराण बनेका हुन्। सबै वेद, उपनिषद् पुराणको निष्कर्ष गीता हो। गीता धार्मिक पुस्तक १८ अध्यायमा लेखेको छ।
अर्जुनले महाभारत लड्दिन भनेर अज्ञानी भएका बेला श्रीकृष्णजीले राम्रो ज्ञान प्राप्तिका लागि गीताको ज्ञान भनेको सुनाएको हो । तै पनि अर्जुनलाई चित्त नबुझेकोले भगवान् श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई विश्वरूप दर्शन दिएर प्रस्ट पारी ज्ञान प्राप्ति गरिदिएको हो । अर्जुनलाई महाभारतलाई लड्न तयार गरिदिएको हो । यसरी निष्कामना अर्जुनमा उत्पत्ति गराइदिएको हो । यो सबै ज्ञानलाई गीतामा भगवान्ले १८ अध्यायमा मनन चिन्तन गराएको हो। तिनै १८ अध्याय हिन्दु धर्मको मुख्य महत्वपूर्ण धर्मको नियम स्वरूप हो। यिनै १८ अध्यायको कुरालाई सारांशमा हेर्दा भगवान्को १८ इश्वरीय कानुन ९१८ कमाण्डमेन्टस्० भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। इश्वरीय कानुन भन्नाले हामी मानिस १८ वटा नियमलाई पालना गरी जीवन चलाउन भवसागर तर्नलाई अर्पण गर भनी भगवान्को आदेश हो।
अतः गीतालाई हामी १८ कमाण्डमेन्टस् भन्छौँ। जस्तो कि बाइबललाई क्रिस्चियनले दश कमाण्डमेन्टस् भन्छन्। गीताको १८ अध्यायको मुख्य सार कुरा यस्तो छ । यसबाट आफ्नो जीवनलाई सुधार्नुहोस्, लाभ उठाउनुहोस्।
१८ कमाण्डमेन्ट: गीताको मुख्य कुरा
अध्याय १– मोह या सुख शान्तिको अधीनमा नपर्नु ।
२– शरीर नाशवान, आत्मा अविनाशी सम्झेर कर्तव्य पालना गर्नु ।
३– निष्काममा भावले परहिताय गरी कर्तव्य पालना गर्नु ।
४– तत्व ज्ञानको अनुभव गरी निःस्वार्थ भावले कर्म गर्नु ।
५– सधैँ तितिक्षामा रहनु अर्थात् सुखदुःखमा समान भाव हुनु ।
६– अन्तस्करणमा समता राख्नु ।
७– सबै कुरा भगवान् नै हो भनी स्वीकार्नु सबैमा ब्रह्मभाव र हुनु ।
८– सधैँ भगवान्को स्मरण गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु ।
९– सबै मानिस भगवत प्राप्तिका अधिकारी हुन् भनी सम्झनु ।
१०– विलक्षण, विशेषता, सुन्दरता, महता, विद्वता बलबता आदि भगवान्को नै अंश मानी भगवान्को चिन्तन गर्नु ।
११– यो चराचर जगत् भगवान्को नै स्वरूपा मानेर विराट रूप भगवान्को दर्शन गर्नु अर्थात् जगत् नै भगवान, भगवान् नै जगत् हो भन्नु ।
१२– शरीर, इन्द्रीय, मन, बुद्धिले आफूलाई भगवान्मा अर्पण गर्नु ।
१३– संसारमा एक परमात्मा तत्व नै जान्न योग्य वस्तु हो भनी जानु ।
१४– सत्व, रज, तम यी तीनै गुणबाट अतित भई अनन्य भक्ति गर्नु ।
१५– एक परमात्मा मानेर अनन्य भक्तिभावले उनको भजन गर्नु ।
१६– जन्म, मरणको चक्रबाट छुट्न दुर्गन दुराचारको त्याग गर्नु ।
१७– जुनसुकै शुभ कर्म गरे पनि भगवान्को नाम स्मरण, उच्चारण गर्दै आरम्भ गर्नु ।
१८– भगवत शरणागती हुनु र भावले भगवान्को शरणमा पर्नु ।
– प्रा.डा. शिवप्रसाद धौभडेल
आफ्नो जीवनकालमा यी ३ राशिका ब्यक्ती अत्यान्तै भाग्यशाली हुने गर्छन, कतै तपाईको भाग्य चम्कियो कि ? जानाकारी लिनुहोस
एजेन्सी – हरेक व्यक्ति सफल हुनको लागि धेरै नै मिहिनेत गर्छन् । तर धेरै कम मानिसले मात्रा सफलता पाउँछन् । ज्योतिषशास्त्रको कुरा मान्ने हो भने सफलताको पछि मानिसको भाग्यको योगदान पनि हुन्छ । यदि राशिको हिसाबले हेर्ने हो भने तीन यस्ता राशि छन् जसका व्यक्तिहरुलाई सधैँ सफलता मिल्छ । कुन हुन् त ति तीन राशि रुतल पढ्नुहोस्ः
मेष राशि: सबै राशिमध्ये सबैभन्दा पहिला नम्बर १ मा यो राशि आउँछ । ज्योतिषको कुरा मान्ने हो भने मेष राशि भएको व्यक्तिमा नेतृत्वको क्षमता एकदमै राम्रो हुन्छ । यसका साथै मेष राशि भएकाहरुको दिमाग पनि धेरै नै तेजिलो हुन्छ र यीनीहरु कन्फिडेन्ट पनि हुन्छन् जसले गर्दा सधैँ सफलता पाउँछन् । धनु राशि यी तीन राशिमध्येको एक धनु राशि पनि हो । धनु राशिका व्यक्तिहरु धेरै नै मिहिनेती हुन्छन् र यसको साथै यीनीहरुको स्वभाव पनि क्रान्तिकारी हुन्छ जसले यीनीहरुलाई अरु व्यक्तिहरुको तुलनामा ज्यादा सफत बनाउँछ ।
मकर राशि: ज्योतिषका अनुसार मकर राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो करियरमा धेरै नै सफल हुन्छन् । यीनीहरुलाई जीवनमा कहिल्यै पनि पैसाको अभाव हुँदैन । मकर राशिका व्यक्तिको पारिवारिक जीवन पनि धेरै नै सफल मानिन्छ ।
भुलेर पनि अनुहारमा नलगाउनुस् यी चिज, जसले बनाउँनेछ अनुहारलाई कुरुप
एजेन्सी - सुन्दर बन्ने चाहना हरेकको व्यक्तिको हुन्छ । जसले पनि अनुहारलाई सुन्दर बनाउन सके सम्म हर कुराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । मानव शरिरको सबैभन्दा संवेदनशिन क्षेत्र भनेको नै अनुहार हो यहि अनुहार नै कुरुप भयो भने विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन् । चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याले सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाएर सुन्दरता नै लुटिदिन्छ त्यसैले अरुको लहैलहैमा लागेर अनुहारमा जे पायो त्यहि प्रयो गर्नु हुँदैन् । आज हामी तपाईहरुलाई अनुहार सुन्दर बनाउनको लागि भनेर प्रयोग गर्न नहुने ५ चीजको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसको प्रयोगले अनहारलाई कुरुप बनाउनेछ ।
१.भनेगर : भेनेगरमा केही मात्रामा एसिड प्रयोग गरिएको हुनाले प्रत्यक्ष अनुहारमा भेनेगरको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । जसले अनुहारको छालामा असर पार्ने भएकाले भेनेगरमा अन्य चिज मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने छ । सकेसम्म यसको प्रयोग नगर्दा नै उचित हुनेछ ।
२. बियर : बियर पनि अनुहारमा लगाउनको लागि उचित छैन् । एसिड मिसेर निर्माण गरिने भएको कारण दैनिक रुपमा अनुहारमा बियर प्रयोग गर्दा डन्डिफोर आउने र अनहार भारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
३.खाने सोडा: धेरैको बुझाइ छ अनुहार सफ गर्नको लागि सोडा प्रयोग गर्नु पर्छ । तर यो बुझाइ एकदमै गलत हो । धेरै समय खाने सोडालाई अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा धब्बा र दागहरु आउने हुन्छ
४.पुदीना : पुदिनाले अनुहारलाई सफा गर्न त मद्दत गर्छ तर धेरै समय पुदिनाको प्रयोग गर्नाले विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । कतिपयलाई पुदिनाको प्रयोगले डण्डीफोर आउने गर्छ ।
५.मन्जन: इन्टरनेटको दुनियाँले धेरै कुरा सिकाउन सजिले भएके छ । त्यसकै प्रभावले होला मन्जनको प्रयोग गरेर अनुहारलाई चम्किलो बनाएको इन्टरनेट तिर देखन सकिन्छ । जसको प्रयोगले अनुहारमा चमक त आउँछ तर अनुहार बिग्रन भने धेरै समय लाग्दैन् । जसले गर्दा चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याहरु आउन सक्छन् ।
गर्मिमा एसी ठिक कि कुलर जान्न्नुहोस महत्वपूर्ण कुराहरु
एजेन्सी - वायुमण्डलमा तातो हावा चल्न थालेको छ । घामको राप थप चर्को बन्दैछ ।तराई लगायतका क्षेत्रको तापमान उच्च रहने गर्छ । तराईका खासगरी शहरी क्षेत्रको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेगर्छ । मध्य गर्मीमा काठमाडौंको तापमान ३० डिग्री सेल्सियस पुग्छ । रुपन्देही, भैरहवा, बारा लगायतको गर्मी खपिनसक्नु हुन्छ । यी क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने गर्छ
यसरी बढ्ने गर्मीबाट कसरी राहत पाउने
केही विकल्प छन् । प्राकृतिक रुपमा र कृतिम रुपमा गर्मी छल्ने काइदा छन् । कोही गर्मी छल्न हिल स्टेशन अर्थात पहाडी क्षेत्रतिर उक्लन्छन् । कोही चिसो पानीमा डुबुल्की मार्छन् । कोही एसी, फ्यान वा कुलरको साहारा लिन्छन् ।हिल स्टेशन जाने, पौडी खेल्ने आदि दीर्घकालिन उपाय होइन । किनभने हामी आफ्नो कामकाज, पेशा, व्यवसाय छाडेर गर्मी अवधीभर पहाडतिर उक्लन सक्दैनौ । चिसो पानीमा डुबुल्की मारेर बस्ने कुरा पनि भएन ।
गर्मी क्षेत्रमा घर, कार्यलय, कार्यथलो आदिमा फ्यान, एसी, कुलर जस्ता उपकरण जडान गरिन्छ, जसले कृतिम रुपमै भएपनि गर्मीबाट राहत दिलाउँछ । अर्थात आफ्नो कोठा, कार्यथलोलाई वाताअनुकुलित बनाएर गर्मी छल्न सकिन्छ ।हुन त तपाईंरहामीले अनुभव गरेकै छौ, कुलर वा एसीमा लामो समय बस्दा टाउको दुख्ने, रुँघा लाग्ने जस्ता समस्या हुन्छ । खासगरी श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरुलाई यसबाट थप हानी हुन्छ । त्यसो भए यी उपकरणमध्ये कुन बढी प्रभावकारी र स्वास्थ्यका हिसाबले कुन उपयोगी त ?
हाम्रो स्वास्थ्यका हिसाबले एसी उपयुक्त कि कुलर
कतिपय अवस्थामा एसी पनि ठिक लाग्छ । किनभने यसले हावालाई चिसो बनाउनका साथै खानेकुरालाई पनि ताजा राख्न सहयोग गर्छ । त्यसैगरी कुलरको कुरा गर्दा यसले धेरै विद्युत खपत गर्दैन । स्वास्थ्यका हिसाबले चाहि कुन बढी उपयोगी त
कुलरको पानी यदि समयमा बदलिएन भने यसबाट डेंगु, मलेरिया फैलाउने लामखुट्टे फैलन सक्छ । जबकी एसीमा त्यस्तो खतरा हुँदैन । हुन त लगातार एसीमा बस्नु पनि शारीरिक हिसाबले फाइदाजनक मानिदैन । तपाईं लगातार एसीमा बस्नुभयो भने एसीमै बस्ने बानी पर्छ । यसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीमा पनि समस्या निम्त्याउँछ । किनभने एसीमा बसिरहँदा शरीरले जसरी पसिना निकाल्नुपर्ने हो, सो निस्कदैन ।
एसीमा लामो समय विताउने व्यक्तिलाई श्वासप्रश्वासको समस्या हुनेगर्छ । एसी चलाइरहेको बेला हामी सबै झ्याल ढोका बन्द गरेर बस्छौ । बाहिरको हावा घरभित्र पस्न पाउँदैन । जति हावा कोठा एंव घरभित्र हुन्छ, त्यती हावा प्रदूषित अवस्थामा पनि हुन्छ । यसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ । यो समस्या अझ उनीहरका लागि बढी हुनसक्छ, जसलाई दमको समस्या छ । साइनस र टाउको दुखाईस्ति व्यक्ति जो एसीमा चार घण्टाभन्दा बढी समय बिताउँछन्, उनीहरुलाई साइनसको खतरा हुन्छ ।
तौल बढाउन सक्छस्कहिले काहीँ यस्तो पनि देखिएको छ कि, एसीको कारण व्यक्तिको तौल बढ्ने । कारण के हो भने, जब तपाईं एसीमा बस्नुहुन्छ तपाईंको मेटाबोलिज्म कम हहुन्छ । दिनभर एसीमा बसेर काम गरिरहँदा शरीरबाट पसिना निस्कदैन । शरीरको फ्याट बर्न हुँदैन । यही कारण मोटोपन बढ्ने भय रहन्छ । छाला रुखो हुन्छ एसीमा लगातार बसिरहँदा छाला रुखो हुने समस्या हुन्छ । एसी २० देखि २२ डिग्रीसम्म चलाइएको छ भने त खास समस्या भएन, तर त्यो भन्दा बढी चलाउँदा त्यसले छालालाई रुखो बनाउँछ । यसैले एसीमा बस्दा पर्याप्त पानी पनि पिउनुपर्छ ।
ताजा हावाबाट बञ्चितस्जब तपाईं लामो समय एसी रुपमा बस्नुहुन्छ, ताजा हावा प्राप्त हुँदैन । फ्रिन ग्यासले तपाईंको कोठाको वातावरण गर्मीलाई अवाशोषित गरेर कोठालाई चिसो बनाउँछ । गर्मी हावा र वतावरण पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । शरीरको तापमान सन्तुलन राख्नका लागि हामीले चिसो हावाका साथै गर्मी हावामा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।
गर्मी मौसममा किन मेवा खाने यस्ता छन् अचुक फाइदा
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यका लगाएत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ह्वात्तै गर्मी चढिसकेको छ । यस्तो गर्मी मौसममा स्वस्थ्य रहन खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै गर्मी मौसममा विभिन्न फलफूलको सेवन गर्नु लाभदायी मानिन्छ । गर्मीको सिजनमा पाइने फलफूलमध्ये मेवा पनि एक हो । मेवा जा–कोहीलाई पनि मन पर्छ । तर तपाई हामी मध्ये धेरैले यसको महत्व नै नबुझी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । मेवाका स्वादका कारण प्रभावित बनेका तपाई हामीले जान्नै पर्ने र आफ्नो दैनिक आहारामा छुटाउँदै नहुने मेवाका विशेषताहरू यस्ता छन् ।थोरै क्यालोरी, धेरै पौष्टिक तत्व भएको यो गुनिलो फललाई मोटोपन घटाउन प्रयास गरिरहनु भएका मानिसहरूले आहाराको रुपमा लिन सक्नुहुन्छ । कब्जियत र अपच भएको बेला मेवाको सेवन गर्नाले राहत मिल्छ ।
टुक्रा पारिएको मेवाले छालाको घाउ र चोटपटक लागेको ठाउँमा लगाएमा निको पार्छ । यदि मेवा सही मात्रामा खाने गरेमा यसले मानिस शरीरको रोगविषहरुबाट छुटकारा दिन्छ । यसको नियमित प्रयोगले क्यानसर हुनबाट समेत जोगाउँछ । मेवाले कपाल बढाउनमा समेत मद्दत गर्छ ।
साम्राज्ञीको जोडी अंकित जुराएर ‘रातो टिका निधारमा’ घोषणा
काठमाडौं - निर्देशक अशोक शर्माले नयाँ फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ घोषणा गरिएको छ । आइतबार साँझ कमलपोखरी स्थित कुमारी चलचित्र भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमा कलाकार परिचय गराउदै फिल्म घोषणा गरिएको हो । गतबर्ष सफल फिल्म ‘जय भोले’ बनाएको ए।ए ग्रुप अफ कम्पनीजबाटै ‘रातो टिका निधारमा’ बन्न लागेको हो । फिल्मको मुख्य भुमिकामा निर्माता निर्देशक शर्माका छोरा अंकितले डेब्यु गर्दैछन् । मलेसियाबाट डिजिटल फिल्म एण्ड टेलिभिजनको कोर्षमा ब्याचलर सकाएका अंकितले ‘जय भोले’मा बुबा अशोकलाई सघाएका थिए ।
फिल्ममा उनको जोडी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग जोडी बन्नेछिन् । नीता ढुंगाना, रविन्द्र झा, बुद्दि तामाङ र खुश्बु खड्काको पनि मुख्य भुमिका रहने फिल्ममा बसुन्धरा भुषाल, लक्ष्मी गिरी, अरुणा कार्की, राजाराम पौडेल, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा, अर्जुन श्रेष्ठ लगायतको पनि अभिनय रहने छ । फिल्म घोषणा कार्यक्रममा कलाकार तथा प्राविधिकलाई अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीले ‘रातो टिका’ लगाइदिएकी थिइन् । फिल्मको छायाँकन १० जेठबाट सुरु हुनेछ । छायाँकनको सुरुवातमा फिल्मको शिर्ष गीत भव्य सेटमा खिचिने निर्देशक किरण शर्मा र कृति शर्मा निर्माताको रुपमा फिल्ममा शम्भुजित बाँस्कोटा र कल्याण सिंहको संगीत, बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी, पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन, मित्र देव गुरुङको सम्पादन, राजेश शाहको भिएफएक्स रहनेछ ।
मंगलसेन नगरपालिकाको गाडीमा आगजनी
विकासको नयाँ मोडल अघि नबढाए मुलुक संकटमा फस्छः प्रचण्ड
अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई स्थान अभाव
पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउँछ
स्थानीय निर्वाचनको दुई वर्ष सेवा प्रवाह थाल्नु ठूलो उपलब्धि
प्रहरी सक्रियताले अपराधका घटनामा कमी
संस्कृति संरक्षण सबैको कर्तव्य
यूटीएलको ठेक्का नरोक्न अन्तरिम आदेश
समाजवादी पार्टी र राजपाबीच वार्ता
9869663933 9818020888 9818022888
Yeskhabar Sanchar Pvt. Ltd. New Baneshwor, Kathmandu +977-1-6911611,9869663711 info@yeskhabar.com marketing@yeskhabar.com article@yeskhabar.com
Copyright © 2017-2019 - एसखबर संचार प्रा.ली. द्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित -सूचना बिभाग दर्ता न :-843/074-75